Xildhibaan ka badbaadey qaraxii Maka Al-Mukarama ee Muqdisho
By Caalamka On Sep 18, 2019
Xildhibaan Cabdiqaadir Carabow oo kamid ah mudaneyaasha baarlamaanka Soomaaliya. Ayaa ka badbaadey qaraxii fiidnimadii Arbacadda lagula eegtay wadada Maka Al-Mukarama ee bartamaha magaalada Muqdisho.
Qaraxa oo ahaa Miino wadada la dhigay, Ayaa lala eegtay gaadiid uu watay Xildhibaanka. Iyada oo qaraxa khasaaraha ugu badan uu gaarsiiyay gaari Cabdi Bile ah oo ilaalinayay Xildhibaanka.
Saraakiil dhinaca amaanka ah. Ayaa Warbaahinta Saxafadda u sheegay in qaraxa ay ku geeriyoodeen 3 qof oo laba kamida ay ahaayeen Illaalada Xildhibaanka. Halka qof kalena uu ahaa Nin Darawalka Mooto Bajaaj wadada mareysay.
Xildhibaanka Caraboow ayaa la sheegay in goobta laga kexeeyay isaga oo bedqaba. Waxaana halkaasi rasaas dhowr jiho u riday ilaalada Xildhibaanka iyo askar kale oo ku sugneyd isgoyska Xaaji Baasto ee magaalada Muqdisho oo ah, Goobta uu kadhacay Qaraxu.
Waxaa sidoo kale jira, Dad dhaawacyo ay ka soo gaareen qaraxa oo u abdnaa kuwo ku sugnaa Hoteel cusub oo caawa loo fadhiyay xafladiisa xarig jarka. Kaasoo ku yaala meel kudhow goobta qaraxa ka dhacay.